विश्वका दिग्गज खेलाडीहरुको रेर्कड तोड्दै नेपालका सन्दीपले बनाए यस्तो किर्तिमान ! « The News Nepal
विश्वका दिग्गज खेलाडीहरुको रेर्कड तोड्दै नेपालका सन्दीपले बनाए यस्तो किर्तिमान !
काठमाडौं । पछिल्लो समय विशेष चर्चामा रहेका नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई ठुलो सफलता मिलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी)का अनुसार नेपाली लेग स्पिनर लामिछाने सन् २०१९ मा सर्वाधिक विकेट लिने स्पिनर बनेका छन् ।
सन् २०१९ को जनवरीदेखि मे १ सम्म सन्दीपले २७ विकेट लिँदै पाकिस्तानका पूर्वकप्तान शाहिद अफ्रिदी, अफ्गानिस्तानका राशिद खान, बङ्गलादेशका सकिब अल हसनलाई पछि पार्दै यो रेर्कड कायम गरेका हुन् । लामिछानेले जनवरीयता खेलेका सबै खेलमा गरेर २७ विकेट लिएका छन् । बङ्गलादेश प्रिमियर लिगमा सिल्हेट सिक्सर्सबाट खेलेको खेलमा सन्दीपले चार विकेट लिएका थिए । त्यस्तै यूएईसँगको तीन टि– २० सिरिजमा पाँच विकेट लिन सफल भएका थिए ।
युएईसँगको सिरिजपछि पुनः अष्ट्रेलियाको बिग ब्यास लिग खेल्न गएका सन्दीपले ४ विकेट लिएका थिए । पाकिस्तान सुपर लिगमा सन्दीपले ११ विकेट लिए । जारी आइपिएलमा सुरुवाती दुई खेलमा तीन विकेट लिएपछि सन्दीपले २७ विकेट पुर्याउँदै यस्तो रेर्कड कायम गरेका हुन् । सन् २०१९ मा अफ्रिदीले २६, राशिद २५ र सकिबले २४ विकेट लिएका थिए ।